Ny karazana soavaly tsara indrindra | Soavaly Noti
Rehefa miresaka momba ny karazana Equine tsara indrindra isika, dia tsy isalasalana fa ny Arabo dia anisan'ireo ankafizin'ny mpitaingin-tsoavaly. Noho izany dia tsy mahagaga raha hazakazaka mipoitra avy amin'ny fiampitana ny Arabo miaraka amin'ny mares sasany izay niavaka ho an'ny mpitaingin-tsoavaly noho ny fanoherana lehibe, ny fikirizany ary ny herim-pony, dia heverin'ny maro karazana soavaly tsara indrindra eto an-tany.
Miresaka momba ny karazan-javamaniry mitovy amin'ny anarana arabo "Shagya" izahay, noho ny anaran'ny soavaly izay niteraka an'io karazany io.
Te hahafantatra bebe kokoa momba an'io karazany io ve ianao?
Tamin'ny taonjato faha-XIX, Tian'izy ireo ny hahatratra karazana soavaly arabo izay tsara ho an'ny haiady miaramila, asa eny an-tsaha any amin'ny faritanin'i Magyar ary koa ho an'ny fitifirana.
Efa tamin'ny taon-jato teo aloha, ny monarka Austrian-Hongroà dia nanomboka tamin'ny fisafidianana soavaly miaraka amin'ny tanjona hahatratrarana avo sy haingam-pandeha ary herim-po ho an'ny mpitaingin-tsoavalin'ny tafiny. Amin'ity fikarohana ity dia antony roa no zava-dehibe: etsy an-daniny ny soavaly Bedouin Shagya ary etsy ankilany, ireo hazakazaka mainty an'ny Hongria sy Tranifornia taranaky ny Tarpan, izay nankafy ny lazany noho ny fahasahiany, ny fiaretany ary ny hafainganam-pandehany.
Ankoatr'i Shagya, ny fototry ny hazakazaka vaovao ity izay niasa, dia napetrak'izy ireo Soavaly soavaly sy kalesy arabo nafarana avy any Atsinanana ka hatrany Hongria. Ireo dia mitovy niampita tamin'ny mares an'ny teratany Tranifornia izy ireo fa voafantina izy ireo noho ny fahaiza-manaony amin'ny fitafiana, fiaretana, herim-po ary faharetana, toetra manan-danja rehetra amin'ny soavaly mpitaingin-tsoavaly.
Ny fiampitana dia natao tao amin'ny toeram-piompiana stud niorina tamin'ny 1789 avy amin'i Major Joseph Csekonics, antsoina hoe Bábolna. Ity toeram-pambolena fiompiana ity dia teo akaikin'ny sisintanin'i Austria sy Slovakia ary an'ny Royal sy Imperial Hugría.
Andao hiresaka bebe kokoa momba izany Shagya, noheverina ho soavaly manan-danja indrindra amin'ny fananganana an'io karazana io. Soavaly Bedouin nisy haavo 160 sm izy, izay nentina tany Hugria avy any Syria tamin'ny 1836 noho ny fahaizany miteraka tsara sy toetra mampiavaka azy. Azo antoka fa safidy mety izany, satria Rehefa nahita ny valim-panantenan'ny zanany, dia tapaka fa hitondra ny anaran'io soavaly io ny karazany vaovao. Marina fa ny fanekena Arabo Shagya dia tsy ho eken'ny World Arabian Organisation Horse hatramin'ny faramparan'ny taona XNUMX.
Tamin'izany fomba izany no niampitana ireo soavaly zanatany tsara indrindra niaraka tamin'ny soavaly arabo, namorona soavaly matanjaka sy lava kokoa noho ny Arabo ary nanana ny toetra tsaran'ity farany koa.
Ilay Shagya Tsy ela dia nanjary soavaly tian'ireo manamboninahitra izy ireo an'ny mpitaingin-tsoavaly ary mahazo laza eo amin'ny tontolon'ny Equine noho ny fahaizany mahay mitaingina.
1 Ny karazany anio
2 Toetra mampiavaka ny Shagya
3 Karazan-tsakafo 10 hafa napetraka eo amin'ny lampihazon'ny karazan-jazakely
3.1 Soavaly Arabo
3.3 Soavaly telovolana
3.4 Soavaly hosodoko
3.5 English Thoroughbred
3.6 Soavaly Andalosiana
Ny karazany anio
Amin'izao fotoana izao, ny hazakazaka Shagya Nihalehibe tamina toeram-pambolena sy fiompiana maro karazana izy ireo, miaraka amin'ny marimarina kokoa any Alemana, izay tamin'ny taona 1970 dia nisy ireo mpiompy namporisihana hampiditra an'io karazana io amin'ny tontolon'ny mpitaingina soamantsara amin'ny fahombiazana lehibe. Ny fiompiana any Eropa sy Amerika dia niparitaka be nandritra ny taona maro, nahazo mpanaraka sy mpankafy. Any Espana mpiompy vitsivitsy Niara-niasa tamin'ny fiompiana an'io karazany io koa izy ireo ary na dia vitsy aza ny santionany dia azo jerena izany eto amin'ny firenentsika.
Toetra mampiavaka ny Shagya
Izy ireo dia mitovy amin'ny tena mahaliana sy mendri-kaja, miaraka amina toetrany tsara ho an'ny fifaninanana avo ary toy ny soavaly fialamboly. Izany koa dia, biby manan-tsaina izay mianatra haingana sy mora ny torolalan'ny mpanabe.
Miaraka amin'ny hahavony eo anelanelan'ny 150 cm sy 155 cm no misy azy ireo hozatra, rantsam-batana matanjaka ary hamafisana, izay mampiseho lakroa miaraka amin'ny fitoviana ra mafana. Plus, nandova ny hakanton'ireo razamben'ny Arabo, miaraka amin'ny fihetsika mihaja sy mihetsika. Ny estetika dia equine arabo mahazatra nefa manana elatra lehibe kokoa.
Ny palitao manjaka dia volondavenona, na dia misy aza ny loko mampiavaka ny soavaly arabo.
Izany, noho izany, a equine tena mahay, izay mifanaraka tanteraka amin'ny hetsika soavaly rehetra, manomboka amin'ny lahasa fitifirana maivana ka hatrany amin'ny fifaninanana avo lenta.
Karazan-tsakafo 10 hafa napetraka eo amin'ny lampihazon'ny karazan-jazakely
Araka ny efa nolazainay teo am-piandohan'ny lahatsoratra, ny lisitry ny môtôly tsara indrindra eto an-tany dia tsy maintsy manana toerana ho an'ity karazany ity. Izany dia iray amin'ireo karazana soavaly tranainy indrindra ary koa ireo génétique misy azy dia hita amin'ny ankamaroan'ny karazany maoderina soavaly mitaingina.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ireo biby manan-tsaina ireo ianao, izay mampivelatra fifandraisana akaiky amin'ny olona sy toetra tsara izay nisafidianana azy ireo ho an'ny hetsika Equine maro be, dia mamporisika anao izahay hamaky ny lahatsoratray: Ilay soavaly arabo
Ity karazany ity dia avy amin'ny voafantina nataon'ny Indiana Nez Perce, avy amin'ireo soavaly amerikana, mitady biby izay mifanaraka amin'ny zavatra antenainao amin'ny fihazana sy hetsika ady. Nifidy ny sasany izy ireo biby mahatohitra tena afaka mandeha lavitra tsy misy olana. Ary koa, ny maha-andriana ary miavaka amin'ny palitao manokana.
Manoro hevitra anao izahay hamaky Soavaly Appaloosa sy ny palitaon'izy ireo mampiavaka azy hianarana bebe kokoa momba ny tantaran'io karazany io.
Ity karazany ity, izay antsoina koa hoe Quarter Horse, dia avy any Etazonia ary avy amina asa fohy 400 metatra miala ny toerana misy ny anarany. Izany dia iray amin'ireo karazana miaraka amin'ireo santionany voasoratra anarana betsaka indrindra manerantany, ka miharihary ny lazany. Izany rehetra izany dia noho ny fahaizany mitaingina tsara sy ny fanoherany ny dia lavitra.
Voalaza momba azy ireo fa soavalin'ankizy sy tantsaha monina sy maty an-tsoavaly izy ireo, ilaina ny fahalalana bebe kokoa momba azy ireo, sa tsy izany? Soavaly telovolana
Io karazany io koa Izany dia noho ny Native Amerikanina, izay nanomboka ny fiompiana tamin'ny fiampitana ny karazana soavaly ampahefatry ny soavaly misy volony Pinto. Mamorona karazana Equine tena mety amin'ny asa fiompiana na toeram-piompiana, mitaingina soavaly ary mitaingina soavaly. Izy ireo koa dia tena mety amin'ny mpitaingina tanora kokoa, ny maha sariaka, manan-tsaina ary miasa mafy dia mitovy.
Thoroughbreds dia biby mizana mirazotra, kanto raha jerena izany dia haingam-pandeha sy haingam-pandeha. Izy ireo dia taranaky soavaly arabo telo izay nafarana tany Angletera teo anelanelan'ny taona 1683 sy 1728. Ireo soavaly Thoroughbred maoderina rehetra dia nateraka avy amin'ny laharan'ny soavaly soavaly iray. Ireo biby ireo niampita niaraka tamin'ny mares anglisy izy ireo mba hahatratrarana ilay hazakazaka tsara indrindra azo atao, vokatr'izany Ny karazana soavaly Thoroughbred.
Fantatra amin'ny anarana hoe Espaniola purebred koa izy io, iray amin'ireo soavaly hafa izay tsy azo hadino amin'ny lisitr'ireo soavaly tsara indrindra eto an-tany. Izahay dia teo aloha iray amin'ireo hazakazaka tranainy indrindra, soavaly Iberianina iray karazana baroka, heverina ho iray amin'ireo soavaly tsara indrindra amin'ny ady noho ny heriny ary miavaka amin'ny hatsaran-tarehiny koa indrindra ho an'ny mane sy rambony matevina.
Ity karazana ity dia nanana anjara toerana lehibe amin'ny hazakazaka maoderina na any Amerika na any Eropa. Raha te hahafantatra misimisy kokoa momba ny tantarany ianao dia mamporisika anao hamaky: Soavaly Andalosiana
Ity karazana Equine ity dia iray amin'ireo karazana soavaly voalohany novolavolaina tany Etazonia ary noho izany dia nisy fiantraikany tamin'ny karazany marobe tao amin'ny firenena toy ny soavaly Quarter na soavaly Tennessee Walking. Izy ireo dia biby mifono sy voadio izay manana fahaiza-manao betsaka, izay mahatonga azy ireo ho tonga lafatra ho an'ny fifehezana maro.
Ny toetrany tsara dia mahatonga azy io ho an'ny soavaly mitaingina soavaly, fialam-boly ary asa sasany toy ny soavaly asa.
Afaka mianatra bebe kokoa momba an'io sy ny karazana amerikana hafa eto ianao: Ny karazana soavaly amerikana
Izahay dia teo aloha iray amin'ireo hazakazaka lehibe indrindra amin'ny fitsipi-pifehezana. Izy io dia iray amin'ireo karazana mahazatra voafidy ho an'ny akanjo. Ankoatr'izay dia iray amin'ireo hetsika ara-panatanjahantena tena mahomby, izay mahatonga azy io ho karazany malaza tokoa.
Momba ny equinos mailamailaka miaraka amin'ny hery mitsambikina miavaka misaotra ireo rantsany tena tsara. Ho fanampin'izay, manana a toetra milamina sy mirindra. Te hahafantatra misimisy momba ireo equines tsara indrindra ireo ve ianao? Manoro hevitra izahay: Soavaly Hanoveriana, iray amin'ireo karazana fitsambikinana indrindra
Dinihina io ny karazana Equine kanto indrindra. Tena soavaly manan-danja tokoa izy ireo eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahan-tena sy fitafiana mitaingina soavaly, izay koa efa nanana fahombiazana Olaimpika maro.
Biby izy ireo dfanoherana lehibe, tanjaka ary fahatsapana, izay manana ny lazany ho soavaly manahirana. Na izany aza, miaraka amin'ireo mitaingina azy dia biby azo antoka izy ireo.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba azy ireo ianao dia aza adino: Soavaly trakehner, mampiavaka ny karazany kanto indrindra
Avy amin'ny faritanin'i Le Perche izy io, a soavaly mitaingina mahery sy matanjaka ary tsara tarehy. Niparitaka ny karazany ary isaky ny firenena dia nipoitra ireo karazana karazan-karazany isan-karazany.
Taorian'ny Ady Lehibe Faharoa, nampitombo ny isan'ny kopia malaza ity karazany ity. Izany dia vokatry ny filàna famindrana fitaovana mavesatra hanarenana ireo loza nateraky ny ady.
Ho hitanao ato ny lahatsoratra feno momba ireo equines lehibe ireo: Soavaly percheron
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Karazan-tsoavaly » Ny karazana soavaly tsara indrindra
Rafitra taolana soavaly